Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon | Yangon Yellow Pages
199 , 01 2317502 , 01 2317503
191 , 01 252011
192 , 1830 , 01 500005
01 2302285 , 01 2302286 , 01 2302287
01 372753 , 01 370056
01 292288 , 01 292272 , 01 298651
Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Dagon Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Dagon
HISTORY & BOUNDARIES
Dagon Township is located immediately north of downtown Yangon. The township comprises five wards and shares borders with Bahan Township in the north, Ahlone Township in the west, Mingalar Taung Nyunt Township in the east, and Lanmadaw Township, Latha Township and Pabedan Township in the south. Dagon wasasmall fishing village founded by the Mon in the 6th century, CE, around the Shwedagon Pagoda. Throughout much of the history, the village was just in the periphery of Thanlyin (Syriam), the commercial city located across the Yangon river. Still, because of the pagoda, Dagon's cultural significance was far greater than its size. In 1755, King Alaungpaya captured the village, renamed it Yangon (most commonly translated as "End of Strife"), and foundedalarger city by adding settlements such as Ahlone, Pabedan, Kyauktada, and Botataung.
Over 1,500 businesses, total around 24,600 employees working in these respective businesses, its united with total5Wards, Area: 4.7 sq km – Density: 5,370/sq km, Total Population 25,082 people living in this township. 60% of the businesses mostly situated in Yaw Min Gyi Ward and Pyay (Western) Ward. Dagon has four primary schools, three middle schools and three high schools. The township's Dagon (BEHS-1) and Dagon (BEHS-2) are considered among the top public high schools in the country. Postal code 11191
Dagon is home to some of the most prominent places of the city, including the great Shwedagon Pagoda, the Maha Wizaya Pagoda, the National Museum, the National Theatre and the Yangon Region Hluttaw (Parliament). In the 1950s, the Burmese government cleared the squatters in the southern part of the township and built the Minmanaing Housing Project for senior civil servants. Dagon gained another prominent pagoda in the 1980s when Gen. Ne Win commissioned the Maha Wiziya Pagoda. During the British colonial period, Dagon was mostlyaprosperous neighbourhood, though the areas closer to downtown was full of squatters. Dagon boasted both the Methodist English High School, one of the top English-language medium schools and the nationalist Burmese language medium high school, Myoma High School.
This prosperous neighbourhood boasts many hotels, embassies and diplomatic residences. On6February 2011, the Taw Win Centre,amajor shopping and residential complex, was opened in the township. From here it is justahop, skip and jump to the Sule-Shangri La Hotel, Sakura Tower and the Bogyoke Aung San Market in the downtown, and there areanumber of offices in the immediate area such as Prime Hill Business Square and La Pyae Wun Plaza that are occupied by multi-national companies. With the Park Royal at its centre, this area is probably second only to Golden Valley in terms of its popularity with young and old childless expatriates. This isavery large township that stretches from the Park Royal Hotel and up to Myanmar’s most prized Shwe Dagon Pagoda, People’s Park / People’s Square backing on to Ahlone Township. The most popular area within Dagon is the Yaw Min Gyi Ward including the roads of Nawaday and Bo Yar Nyunt, which isagreat place for apartment living, due to the lively streets and many restaurants.
ဒဂုံမြို့နယ် သည် ရန်ကုန်မြို့တော် ဖြစ်ပေါ်လာရန် သန္ဓေစတည်ခဲ့သည့် မြို့နယ် ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင် တောင်ငူမင်းဆက်၏ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် လှိုင်မြို့၊ မှော်ဘီမြို့၊ ဒလမြို့များနှင့်အတူ ဒဂုံမြို့ ဟူ၍ တည်ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ်အဆင့် ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ၌လည်း ဒဂုံမြို့နယ် နယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
အကျယ်အဝန်း ၁ ဒဿမ ၉၅၉ စတုရန်းမိုင် ရှိပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ပန်းပဲတန်း မြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်နှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်တို့က ဝန်းရံထားသည်။
ရပ်ကွက် (၅)ခု ပါဝင်ပြီး ပြည်လမ်း(အရှေ့)ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း(အနောက်)ရပ်ကွက်၊ ဦးဝိစာရရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်နှင့် ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်တို့ ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၎င်းရပ်ကွက်များတွင် အိမ်ခြေ (၈၂၈)ခု ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု (၄ ၅၇၅)စု မှီတင်းနေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် (၂၅ ၂၁၁)ဦး ရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် စေတီပုထိုးများမှာ ရွှေတိဂုံ၊ မဟာဝိဇယ၊ အလံပြ၊ စိန်ရောင်ခြည်၊ အိမ်တော်ရာနှင့် တန့်တော်မူ တို့ဖြစ်သည်။
အပန်းဖြေစရာ ပန်းခြံကြီးများ ရှိနေပြီး ၎င်းတို့မှာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့် ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ တော်လှန်ရေးပန်းခြံ၊ ဦးဥတ္တမပန်းခြံ၊ ဇီဝကပန်းခြံ၊ သိင်္ဂုတ္တရပန်းခြံနှင့် ဒဂုံပန်းခြံတို့ ဖြစ်သည်။
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာန လက်အောက်ရှိ ဈေးမှာ ဒဂုံရိပ်သာဈေး ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ကုန်တိုက်များမှာ တော်ဝင်စင်တာနှင့် စိန်ဂေဟာ တို့ ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မြဝတီ ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီ အရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင် ရှိသည်။
အဓိကထင်ရှားသည့် လမ်းများမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းတို့ဖြစ်ပြီး ဦးဝိစာရလမ်းတွင် ဝိုင်ဘီအက်စ် ဘတ်စ်ကားများ ပြေးဆွဲခြင်း မပြုပေ။ ပြည်လမ်းတစ်လျှောက်သာ ပြေးဆွဲပြီး တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၅၀၀ ကျသင့်သည့် လေဆိပ်-ဆူးလေ ဘတ်စ်လိုင်း၊ ၂၁၊ ၃၅၊ ၃၇၊ ၃၉၊ ၇၈ အစရှိသည့် လိုင်းများ ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်။
မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းမှာ ဘုရားလမ်းဘူတာမှ ရှမ်းလမ်းဘူတာအထိ ဖြစ်သည်။
စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်မှာ ၁၁၁၉၁ ဖြစ်သည်။
Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၁ ၅၀၀)ကျော် ရှိပြီး လုပ်သားအင်အားစု (၂၄၆ ၀၀၀)ဦးကျော် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်သည် ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်နှင့် ပြည်လမ်း(အနောက်)ရပ်ကွက် တို့တွင် တည်ရှိကြသည်။
ဟိုတယ် (၁၀)လုံး ရှိပြီး အခန်းအများဆုံးမှာ တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟိုတယ် ဖြစ်ပြီး (၅၀၇)ခန်း ရှိသည်။ (၃၅၀)ခန်း ရှိသည့် Parkroyal ရန်ကုန်ဟိုတယ် သည် အခန်း ဒုတိယအများဆုံး ဟိုတယ် ဖြစ်သည်။ Summit Parkview ဟိုတယ်သည် အခန်းပေါင်း (၂၅၁)ခန်းရှိပြီး အခန်း တတိယအများဆုံး ဟိုတယ်ဖြစ်သည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် အဆင့်မြင့်ပညာအနေဖြင့် ဗဟိုသားဖွားသင်တန်းကျောင်း ရှိသည်။ အခြေခံပညာအနေဖြင့် စံပြ မူလတန်းကြိုကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း (၄)ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၃)ကျောင်း ရှိသည့်အပြင် အထက်တန်းကျောင်း (၃)ကျောင်း ရှိရာ၌ အထက(၁) ဒဂုံသည် ဒဂုံ(၁) ဟု လည်းကောင်း ၊ အထက(၂) ဒဂုံသည် မြို့မကျောင်းဟူ၍လည်းကောင်း လူသိများ ကျော်ကြားသည်။
ထင်ရှားသော အဆောက်အဦများမှာ ပြပွဲအမျိုးမျိုး ကျင်းပသည့် တပ်မတော်ခန်းမ၊ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားပြတိုက်၊ နက္ခတ်တာရာပြတိုက်၊ ဗုဒ္ဓဝင်ပြတိုက်၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်တို့ ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးရပိုင် ဆေးရုံးများ ဖြစ်ကြသည့် အမှတ်(၂) စစ်ဆေးရုံနှင့် ကလေးဆေးရုံ တို့ တည်ရှိသည်။
ရှေးယခင်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးစိုက်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သံရုံးအချို့ ရှိနေရာ၌ ပါကစ္စတန်သံရုံး၊ လာအိုသံရုံး၊ မလေးရှားသံရုံး၊ မလေးရှားဗီဇာ one-stop service center (OSC)၊ ရုရှားသံရုံး၊ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံး၊ အီဂျစ်သံရုံး၊ ဘရာဇီးသံရုံး၊ ပြင်သစ်သံရုံး၊ တရုတ်သံရုံး၊ သီရိလင်္ကာသံရုံး၊ ထိုင်းသံရုံး အစရှိသည့် ပြည်ပနိုင်ငံ သံရုံးများ တည်ရှိသည်။ ယခင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သော Prime Hill Business Square တွင် ကနေဒါနှင့် သြစတေးလျ ဗီဇာ လျှောက်ထားရာဌာနများ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
Shwe Dagon Pagoda
Mahar Wizara Pagoda
Thein Gottara Garden
Military of Resistance Park
Taw Win Centre & Taw Win Garden Hotel
Dagon Demographic & Economic Activities
Total Population 25,082*
Sex Ratio 90 males per 100 females
Percentage Of Urban Population 100.0%
Area (km2) 4.7**
Population Density (persons per km2) 5370.8 persons
Number Of wards 5
Number Of Village Tracts -
Total Urban Rural
Population In Conventional HouseHolds 20,417 20,417
Number Of Convetional Households 4,608 4,608
Mean Household Size 4.4 persons***
•In Dagon Township, there are more females than males with 90 males per 100 females.
•All the population in the Township lives in urban areas.
•The population density of Dagon Township is 5,371 persons per square kilometre.
•There are 4.4 persons living in each household in Dagon Township. This is equal to the Union average.
* Includes both household population and institution population.
** Settlement and Land Record Department, Ministry of
Agriculture, Livestock and Irrigation, (2014-2015)
*** Calculated based on conventional household population
Productions 18 1703
Retails 685 2973
Wholesales 74 5048
Services 707 13416
Trading 22 1499
Promotion : Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် ထိ အစိုးရဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး ၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး နှင့် ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ကျိုင်းတုံ မှ ရန်ကုန်၊ ဟဲဟိုးနှင့် မန္တလေးခရီးစဉ်များတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး အစရှိသည့် လျှော့ဈေးများဖြင့် လက်မှတ်များကို အထူး ပရိုမိုရှင်း ဖြင့် ရယူနိုင်ပါပြီ။ News & Info : COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက် နံနက် (၆) နာရီမှစတင်၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် https://mmexamscore.org တွင် ဝင်ရောက်ပြီး မိမိ၏ခုံအမှတ် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် (ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်) တို့ကို ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ မိမိတို့၏ အမှတ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Promotion : Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ မှ စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် ထိ အစိုးရဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး ၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး နှင့် ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် ကျိုင်းတုံ မှ ရန်ကုန်၊ ဟဲဟိုးနှင့် မန္တလေးခရီးစဉ်များတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေး အစရှိသည့် လျှော့ဈေးများဖြင့် လက်မှတ်များကို အထူး ပရိုမိုရှင်း ဖြင့် ရယူနိုင်ပါပြီ။
News & Info : COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများ၏ အမှတ်စာရင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇)ရက် နံနက် (၆) နာရီမှစတင်၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် https://mmexamscore.org တွင် ဝင်ရောက်ပြီး မိမိ၏ခုံအမှတ် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် (ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်) တို့ကို ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ မိမိတို့၏ အမှတ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Start Your Campaign Today
All about Dagon
: Dr Thet Thet Khine
: +9595127145
: U Ba Myo Thein
: +95943154949
Region Hluttaw (Twsp-1)
: U Tin Maung Htun
: +9592543 44157
Region Hluttaw (Twsp-2)
: U Kyaw Zaya
: +959560 1068
NGOs & Charity
Category : Cement
Address : 123, Alanpya Pagoda Rd.,
Phones : 09-770770770, 09-960960560
Max Myanmar Construction Co., Ltd.
Category : Construction & Contractor Equipment & Supplies
Phones : 01-255819, 01-255820, 01-255821, 01-255838
Sein Gay Har
Category : Supermarkets & Shopping Centres
Address : 44, Pyay Rd.,
Phones : 01-395140, 01-504996
Category : Department Stores
Ywar Taw International Trading Co., Ltd.
Category : Air Conditioning Equipment Sales & Repair
Address : 42, 4th to 5th Flr, Pan Tra St., Pan Tra Tower,
Phones : 01-252510, 01-375533, 01-378829, 01-383244, 09-8617430
COVID-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ ခရီးစဉျပွေးဆှဲမှု ရပျနားလိုကျသညျ့ ပွညျတှငျး/ပွညျပ လကွေောငျးလိုငျး (၈) ခု
အစားအသောကျကုနျပစ်စညျးတှကေို အိမျတိုငျရာရောကျ ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ Website နဲ့ APP
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပထမဦးဆုံး COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူ (၂) ဦးအား တှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး MOHS မှထုတျပွနျ
မွနျမာရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားမြား သင်ျကွနျကာလ ပွညျတှငျးသို့ ပွနျလာခွငျးမြား မလုပျသငျ့ကွောငျး အကွံပွုထား
Copyright © 2020 Yangon Directory, Myanmar's leading yellow pages business directory. All Rights Reserved.